मासु खानुका फाइदा र बेफाइदा दुवै छन्
दशैं भन्नेबित्तिकै खानपानसँग सम्बन्धित चाड भनेर चिनिन्छ । दशैंमा धेरै खाइने खाद्यपदार्थमध्येमा एक पदार्थ मासु पनि हो । मासु खानु स्वास्थ्यका लागि कत्तिको फाइदाजनक छ भन्ने बारेमा पनि चर्चा हुने गरेको पाइन्छ । सही तरिकाले मासु खाँदा शरीरलाई फाइदा पुग्छ भने सही तरिकाले खाइएन भने मासु शरीरको लागि विष पनि बन्छ । यस लेखमा मासु खानुका फाइदा र बेफाइदाको बारेमा चर्चा गरिएको छ ।
पोषणका दृष्टिकोणले मासु खानुको फाइदा
हामीले खाने सबै खानाहरूको आफ्नै पोषण महत्व हुन्छ । मासु एक विशेष महत्व भएको खानेकुरा हो । यसलाई सन्तुलित र सही तरिकाले खान सक्नु पर्दछ अनि मात्र यसबाट लिन सकिने फाइदा लिन सकिन्छ होइन भने यो रोगको कारक पनि बन्न सक्छ । केही अनुसन्धानले मासु खानेभन्दा शाकाहारीको आयु लामो हुने पनि भनेका छन् । मासु खानु राम्रो या नखानु राम्रो भन्ने छलफलको छुट्टै विषय हो तर मासु खानेहरूका लागि कस्तो मासु खानु राम्रो, के कुरा विचार पु¥याउनु पर्दछ भन्ने सबाल जटिल र महत्वपूर्ण हुन्छ ।
मासु खानुका फाइदा र बेफाइदा दुवै
हामीलाई मासुले स्वाद मात्र दिँदैन स्वास्थ्यका लागि फाइदा पनि दिन्छ । मासु खान जान्दा धेरै खालका फाइदाहरू छन् भने नजान्दा त्यो भन्दा धेरै खतरनाक बेफाइदाहरू । विशेष गरी शरीरमा सजिलै सोसिन सक्ने उच्च गुणस्तरको प्रोटिन, केही भिटामिन तथा खनिजका लागि मासु उत्तम खानेकुरा हो । हाम्रोजस्तो प्रोटिनको कमीका कारण धेरै कुपोषित भइरहेको मुलुकमा कुपोषणको दीर्घकालीन समाधानका लागि माछा, मासु, अण्डा राम्रा स्रोतहरू हुन् । तर यही फाइदाकर मासुको स्वच्छता र खाने मात्रा तथा तरिकामा उचित ध्यान नपुग्दा फाइदाभन्दा समस्या बढी निम्तिइरहेका छन् ।
मासुका लागि बध गरिने पशुपंक्षीका बारेमा के विचार पु¥याउनु पर्दछ ?
मासुको स्वच्छता कायम गर्नका लागि मासुका लागि बध गरिने पशुपंक्षीको स्वास्थ्य कस्तो छ, काट्नु अगाडि कुन अवस्थामा छ, काट्ने ठाउँ तथा हतियार कत्तिको सफा छ, काटेको मासु राख्ने ठाउँ कत्तिको उपयुक्त छ भन्ने विषयमा विशेष ध्यान दिनु पर्दछ ।
कुनै रोग लागेको पशुपंक्षीको मासु उपभोग गर्दा त्यसमा रहेका रोगका जीवाणुहरू सर्ने सम्भावना धेरै हुन्छ । विशेष गरी रोगी पशुपंक्षीको मासुबाट रोगका कीटाणुहरू, एन्टिबायोटिक तथा हर्मोन अवशेष बढी भएको मासुबाट ती रसायनहरू अनि फोहोर तथा बासी मासुबाट रोग लगाउने हानिकारक जीवाणुहरू हाम्रो शरीरमा प्रवेश गर्न सक्छन् । यस्ता जीवाणुको प्रवेशले झाडापखाला लाग्ने, टाउको दुख्ने, रिङ्गटा लाग्नेजस्ता सामान्यदेखि ज्यानै जान सक्ने खतरनाक लक्षणहरू देखिन्छन् ।
एन्टिबायोटिक बढी भएको मासुको उपभोगले शरीरमा औषधिको प्रभावकारिता घटाई सामान्य सङ्क्रमणका कारण पनि जटिल समस्या भोग्नुपर्ने वा ज्यानै जान सक्ने पनि हुन्छ । पशुपंक्षीको रौँ फाल्न मट्टीतेल खन्याएर जलाउने गरेको पाइन्छ । अखाद्य मट्टीतेल मासुमा खन्याउनु कति खतरनाक हो सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
पशु रोगी भए–नभएको कसरी थाहा पाउने ?
मासुका लागि बध गरिने पशुपंक्षीको स्वास्थ्य कस्तो छ, काट्नु अगाडि कुन अवस्थामा छ भन्ने विचार पु¥याउनै पर्दछ । विशेषगरी पशु असामान्य रूपमा सास फेरिरहेको, रौँ फुलाएर जिंिरङ्ग भएको छ भने जीवाणुको सङ्क्रमण भएको हुन सक्छ । शरीरका जोर्नीहरू बढेका, सुन्निएका, पेट र कल्चौँडो सुन्निएका, बङ्गारा सुन्निएका पशु अस्वस्थ हुन्छन् ।
कतिपय रोग लागेका पशुहरूले प्रायः टाउको पर्खालमा ठोक्ने, आफ्नो पुच्छर वा पेटमा हेरी घुम्नेजस्ता व्यवहार देखाउँछन् । लठ्ठिएको जस्तो अथवा चिन्ताजनक अवस्थामा देखिने, निद्रा लागेजस्तो आँखा, पेट फुलेको, टाउको र खुट्टा तन्काएर सहजै उठ्न वा बस्न नसक्ने पशुपंक्षी रोगी हुन सक्छन् । नाक, कान, गुद्द्वार वा योनीबाट लगातार फोहोरहरू निस्केको पशु वा पखाला लागेको, योनीबाट असामान्य रूपमा गन्हाउने तरल पदार्थ निस्किरहेको वा आँखाका भागहरू बढेका पशुहरू मानव स्वास्थ्यका लागि हानिकारक हुन सक्छन् । पशुको शरीरमा कहीँ कतै घाउ, चोटपटक लागेको छ, रगत बगेको छ भने पनि निको नहुन्जेल मासुका लागि उपयुक्त मानिँदैन ।
मासु कसरी स्वास्थ्यका लागि हानिकारक बन्न सक्छ ?
मासु ३ वटा कारणले स्वास्थ्यका लागि हानिकारक हुन सक्छ ।
पहिलो, पशुपंक्षी बध गर्ने स्थल र शैली, मासु ओसारपसार गर्ने तरिका र मासु भण्डारण गर्ने तरिका तथा पकाउने तरिका सही नहँुदा मासुको माध्यमबाट हानिकारक जीवाणुहरू शरीरभित्र प्रवेश गरी समस्या उत्पन्न गराउन सक्छन् । पशुपंक्षीको शरीरमा बढी सक्रिय हुने आँखा, मुटु, कलेजो, आन्द्रा भँुडी, गिदी आदि खानु हुँदैन ।
दोस्रो, पकाउने तरिका गलत भएर पनि हानिकारक हुन सक्छ । जस्तो कि धुवाँमा पोलिएको मासु सेकुवाको रूपमा खाँदा त्यसमा भएको बेन्जो ए पाइरिनजस्ता रसायनले क्यान्सर निम्त्याउन सक्छन् । बोटुलिनम नामक ब्याक्टेरियाले सङ्क्रमण गरेको मासुमा हुने विषका कारण स्नायु प्रणालीमा असर परी ज्यान जान सक्छ । धेरै मसला हाली पकाएको मासुले शरीरलाई असर गर्दछ ।
तेस्रो, खाने मात्रा र आफ्नो शरीरको अवस्था विचार नगरी खाँदा मासु हानिकारक मात्र होइन ज्यानै दिने कारक पनि बन्न सक्छ । जस्तो कि अधिक मासु उपभोगले स्वस्थ मानिसकै शरीरमा पनि कोलेष्ट्रोल, टिजी, युरिक एसिड बढाइदिन्छ । केही रोग लागेकाहरूका लागि त मासु अभिशाप नै बन्दछ । युरिक एसिड भएकाहरूका लागि रातो मासु धेरै खतरनाक हुन्छ । रगतमा चिल्लोपदार्थ बढेका दीर्घ रोगीहरूका लागि पनि मासु खानु हानिकारक हुन्छ ।
अरु खानेकुराभन्दा माछा, मासु किन छिट्टै बिग्रिन्छ ?
माछा, मासु पौष्टिक दृष्टिकोणले हाम्रो लागि जति फाइदाकर छ सुक्ष्म जीवको लागि पनि त्यति नै फाइदाकर हुन्छ । हाम्रो वरिपरि, हावामा, हाम्रो हात, शरीरमा खरबांैका सङ्ख्यामा त्यस्ता जीवाणुहरू हुन्छन् । तिनीहरूका लागि मासु अति उत्तम पोषिलो खाना हो । मासुमा पानीको मात्रा पनि प्रशस्त हुन्छ । त्यस्ता जीवाणुले सजिलै मासुलाई संक्रमण गर्न सक्छन् र छिटो कुहिन्छ । अझ फोहोर ठाउँमा काटेको छ, राम्ररी तापक्रम मिलाएर राखेको छैन भने मासु झनै छिटो कुहिन्छ । फ्रिजमा राखेर, सुकुटी बनाएर, हल्का उसिनेर बोसोमा डुबाएर राख्दा केही दिनका लागि खान योग्य हुन सक्छ ।
मासु स्वच्छतासम्बन्धी कानुनी व्यवस्था
नेपालमा मासुको स्वच्छताका लागि ऐन कानुन छ तर यसको प्रभावकारिता करिब शुन्य छ । पशु बधशाला तथा मासु जाँच ऐन २०५५ मा मासु पसल सञ्चालन गर्दा काट्ने ठाउँमा टायल हुनुपर्ने, काटेको मासु फ्रिजमा राख्नुपर्ने, स्थानीय निकायको इजाजत लिएर मात्र मासु बेच्नुपर्ने र बधशालामा बाहेक अन्य स्थानमा पशुबध गर्न नहुने व्यवस्था छ ।
त्यस्तै, मासु काट्न तामा वा क्याडमियमको धातुका हतियार, पालिस र इनामेल लगाएका भाँडा वा हतियार, सिसाका भाँडा वा हतियार प्रयोग गर्न नहुने लगायतको व्यवस्था छ ।
ऐन अनुसार मासुमा पानी छर्कन वा डुबाउन पाइँदैन । मासु झुण्ड्याउँदा छाना, भित्ता, खम्बा आदि ठाउँ नछुइने गरी राख्नु पर्छ । तौलने ढक तराजु अन्य वस्तुसँग लसपस नगरेको हुनु पर्दछ । मासु राख्ने टेबुल वा दराज जमीन भन्दा कम्तीमा ५० सेन्टिमिटर उचाइको हुनु पर्दछ । मासु पसल खोला, खोल्सा र पानी जम्ने ठाउँभन्दा टाढा हुनु पर्दछ । किनकि त्यस्ता ठाउँमा सुक्ष्म जीवको बाक्लो उपस्थिति हुने हुँदा तिनले मासुमा सङ्क्रमण गर्न सक्छन् । मासु काट्ने अचानोबाहेक अरु काठको हुन नहुने व्यवस्था छ ।
विकसित मुलुकमा अचानो समेत काठको हुँदैन । तर हामीकहाँ मासु पसलहरूको भुइँदेखि भित्तासम्म, अचानोदेखि टेबुलसम्म काठकै प्रयोग हुन्छ । काठमा सुक्ष्म जीवहरूको भार बढी हुने हँुदा त्यस्तो ती जीवाणुहरू सजिलै मासुमा सर्न सक्छन् । पशुपंक्षी बध गर्नुपूर्व त्यसको स्वास्थ्य अवस्था ठीक भएको नभएको यकिन गरेर मात्र बध गर्नु पर्दछ । यदि पशु बिरामी छ भने त्यसको मासु खाँदा असर पर्न सक्छ । बध गरिसकेपछि पनि मासुको गुणस्तर परीक्षण गर्नु पर्दछ ।
यदि यी दुवै परीक्षणबाट मासु खान योग्य देखिएमा मात्र खानयोग्य हुन्छ । बध गरिने पशु ओसारपसार गर्ने साधन, बध स्थल र मासु पसलभन्दा ३० मिटर टाढा राख्नु पर्दछ । क्षय रोग र छालासम्बन्धी रोग लागेका व्यक्तिहरू मासु पसल र बध स्थलमा जान हुँदैन ।
हाम्रो संविधानले पनि उपभोक्तालाई स्वच्छ खाना खान पाउने अधिकार मौलिक हककै रूपमा परिभाषित गरेको छ । बजारमा बेचिने मासु स्वच्छ भएको ग्यारेन्टी गर्ने दायित्व सरकारका सबै निकायहरू विशेषगरी स्थानीय सरकारको हो । यसमा उपभोक्ताले पनि सहयोग गर्नु पर्दछ ।
शाकाहारी हुनुका फाइदा बढी छन् भन्ने भनाइ सही हो ?
मांसहारी भोजन राम्रो कि शाकाहारी भन्ने विषय विवादमा आइरहने गर्दछ । यस बारेमा सबैका आ आफ्नै खालका तर्कहरू भेटिन्छन् । तर हामी व्यक्तिको तर्कसँग होइन अनुसन्धानले पुष्टि गरेका वास्तविक र आधिकारिक कुराको नजिक हुन जरुरी छ । हामीकहाँ त संस्कृतमा विद्यावारिधी गरेर डाक्टर भएकाहरूले खानाका बारेमा कुरा गरिरहेको देखिन्छ ।
खानासम्बन्धी विषय व्यक्तिको जीवन मरणसँग जोडिएको हुनाले यस बारेमा अनुमान र सुनेका भरमा गरिने प्रचार खतरनाक हुन्छ । यस्ता खतरा कम गर्न दशौं आधिकारिक अनुसन्धानले पुष्टि गरेका कुरालाई आधार बनाएर यस क्षेत्रका विज्ञहरूबाट मात्र खानासम्बन्धी सार्वजनिक टिप्पणी गर्ने संस्कारको विकास हुन जरुरी देखिन्छ । विभिन्न बाबा (जोगी)हरू वा अरु कसैका नाममा अप्राविधिक अनि यस विषयको चुरो नबुझेकाहरूले सोझा जनतामाझ गरिरहेको भ्रामक प्रचार रोक्न जरुरी छ ।
जहाँसम्म शाकाहारी मांसाहारीको कुरो छ । यसमा संसारभर मत बाझिरहेकै छ । हो मासु खाने तरिका, मात्रा र स्वच्छतामा ध्यान नदिँदा मासुले हानि नै गर्दछ । तर यसको अर्थ मासु खानै हुँदैन भन्ने होइन । स्वच्छ माछा, मासु, अण्डाले पोषणका दृष्टिले छुट्टै महत्व राख्छन् । अहिलेसम्मको अनुसन्धानलाई हेर्दा अति मांसाहारी र पूर्ण शाकाहारी (भेगान) दुवै गलत हो । मासुबिना भागै नबस्ने पनि गलत हुन्, माछा मासु छुनै हँुदैन भन्ने पनि गलत हुन् ।
विभिन्न अध्ययनहरू अनुसार पूर्ण शाकाहारी भोजनका कारण भिटामिन बि १२ लगायतका भिटामिन, मिनरलजस्ता कतिपय पोषक तत्वको कमी हुन सक्छ । केही अनुसन्धानले पूर्ण शाकाहारीहरूमा डिप्रेसनको सम्भावना बढी हुने दाबी गरेका छन् । अर्कोतिर मांसाहारी भोजनको अधिक उपभोगले युरिक एसिड बढ्ने, रगतमा बोसोको मात्रा बढ्ने, मुटु रोग जस्ता विभिन्न दीर्घकालीन रोग लाग्ने, रातो मासु र प्रशोधित मासु धेरै खाँदा क्यान्सरसम्म हुन सक्ने पनि आँैल्याएका छन् । विशेषगरी प्रशोधित मासु त अहिले संसारभर क्यान्सर गराउने प्रमुख कारक नै हो ।
मांसाहारी भोजन कम गर्ने र सन्तुलित शाकाहारी भोजनको सेवनले उच्च कोलेस्टेरोल, मुटु रोग, उच्च रक्तचाप, मधुमेहजस्ता समस्याबाट बचिन्छ । मांसाहारी भोजन उच्च गुणस्तरको प्रोटिन तथा कतिपय भिटामिन र मिनरलको राम्रो स्रोत हो । यी पोषक तत्व शाकाहारी भोजनबाट नपाइने भन्ने होइन । तर जति सजिलैसँग मांसहारी भोजनबाट पाइन्छ, तिनै तत्व त्यही मात्रामा शाकाहारी भोजनबाट पाउनका लागि धेरै खालका खानाको विविधता मिलाउन जरुरी हुन्छ ।
स्वाद, सन्तुष्टि, पोषण, खर्च आदिका आधारमा पनि शाकाहारी भोजनलाई प्राथमिकता र नियमित सन्तुलित मात्रामा स्वच्छ माछा, मासु वा अण्डाको उपभोग नै स्वास्थ्यबद्र्धक हुन्छ । शरीरमा सजिलै शोसिन सक्ने उच्च गुणस्तरको प्रोटिन, केही भिटामिन तथा खनिजका लागि मांसहारी भोजन राम्रो स्रोत हो । कतिपय ओमेगा फ्याट्टी अम्लको परिपूर्तिका लागि पूर्ण शाकाहारीभन्दा आंशिक मांसाहारी खाना उत्तम हुन्छ । आइरनको उचित शोषणका लागि पनि मांसाहारी खाना शाकाहारीभन्दा राम्रो मानिन्छ ।
हाम्रोजस्तो प्रोटिन, आइरनजस्ता पोषक तत्वको कमीका कारण धेरै कुपोषित भइरहेको मुलुकमा कुपोषणको दीर्घकालीन समाधानका लागि माछा, मासु, अण्डा राम्रो विकल्प हुन् । भिटामिन बि १२ पशुपंक्षीजन्य स्रोतमा मात्र पाइने हँुदा पूर्ण शाकाहारीहरूले यसको आपूर्तिको लागि बि १२ फोर्टिफाइड खाना वा सप्लिमेन्ट बाहेक विकल्प छैन ।
मानिस सर्वहारी प्राणी हो
कतिपयले मानिस शाकाहारी प्राणी हो भनी प्रमाणित गर्नका लागि बाघ, सिंहजस्ता पूर्ण मांसहारी प्राणीहरूसँग तीखा दाँत, नङ्ग्रा अनि डोलो पेटको तुलना गरी जबर्जस्त प्रमाण जुटाउन खोजेको देखिन्छ । तर पर्यावरण चक्रमा मानिस जन्मजात ओम्निभोरस अर्थात् सर्वहारी प्राणी हो ।
खान जान्दा मांसाहारी भोजनबाट हामीले धेरै फाइदा लिन सक्छौँ भने खान नजान्दा धेरै खतरनाक स्वास्थ्य समस्या निम्तिन्छ । त्यसैले पूर्ण शाकाहारी बन्नुपर्दछ भन्ने अभियान भन्दा आंशिक शाकाहारी बन्ने सन्देश बढी व्यावहारिक हुन सक्छ । (लम्साल पोषणविद् हुन् ।)